Herisetra nataon'ireo sinoa tamin'ny vehivavy gasy
En parler c'est déjà les combattre. Osez dénoncer les violences conjugales et toute forme de violence fondée sur le genre et envers les enfants.
Publiée par voaolana — Le 12 juin 2017
Gravy koa ilay vaovao Tv tsy miankina ny zoma halina= sinoa 5 ( lehilahy 4 sy vehivavavy 1) no ni-viol ankizivavy gasy 20 taona tao amin'ny efitrano faha-6 ny hotely etsy Mahamasina nandritry ny alina rehefa nomen'izy ireo zavamahadomelina. Afaka niantso vonjy tamn'ny finday ity ankizivavy ity, ka tamin'ny 6 ora maraina dia tonga tao amin'ny hotely ny raiamandrenin'ilay ankizivavy gasy sy mpitandro filaminana ka voasambotra ireo sinoa ary noentina eny amin'ny hopitaly ilay ankizivavy hotsaboina.
Asa izay hataon'ny Fampanoavana eo anivon'ny Fitsarana? Raha tsy mametraka fitoriana ve razazavavy dia hoafaka madiodio indray ve ireto sinoa? Hanokatra fanadihadiana momba ireo zavamahadomelina ve ny mpitandro filaminana miady amin'ny zavamahadomelina? Raha mahazo fahafahana ireo sinoa dia mbola havelan'ny fanjakàna malagasy hiriaria eto Mcar ve sa roahina mody any Chine? Ary ianareo mpanao gazety ve mba hamoaka ny sarin'ireo sinoa (tapenana ny masony) sa rehefa gasy ihany no voasambotra no hamoahanareo sary? Ry Solombavambahoaka sy Loholona, sao tokony manao lalàna milaza sazy henjana hoan'ny vahiny tratra manao viol na mifoka zavamahadomelina eto Madagasikara ianareo mialohan'ny hahatongavan'ireo mpizahatany sinoa ketrehin'i Rolland? Sao tokony hamafisina ny fanadihadiana ireo teratany vahiny mialohan'ny hanomezana visas de séjour azy ireo eto Madagasikara mba tsy ho jiolahimboto toa ireto sinoa 5 ireto no hiaraka hiriaria amintsika ka ho loza mitatao isan'andro.
Torohevitra: Mba mailo amin'ny sinoa ianareo zazavavy malagasy mifandray amin'ny sinoa ireny ary ilaisany anadahy mba manaraha-maso ny anabavin'leisany. Tsiahivina fa tany Chine dia nisy vehivavy malagasy maromaro hiasa antrano no nahatongavany tany kinanjo namidy ankalamanjana tamin'ny lehilahy ho hanomezana fahafahampo ny filana ara-nofo ny sinoa. Mailo ihany koa ianareo raiamandreny mampianatra teny sinoa ny zanakareo satria tsy kely lalana ny ratsy. Tsetra tsy aritra, hay ry zareo sinoa koa mba manao fitsarambahoaka, toa ity nahazo teratany afrikana tratra ni-viol sinoa tany Chine koa notapahin'ireo sinoa ny filahian'ilay afrikana araka ity rohy ambany ity (sary faha-2 sy faha-3).
thierry — Ajouté Il y a 1 an
n ah alu aza tratrako oe am amin fianakaviako n atw an zan, asa angamb n anovak az, msaotr am fampitana vw2 eh
Vehivavy novonoina tamin'ny feno habibiana tao Antsirabe
Efa tsy fantatra intsony ny mahazo antsika Malagasy fa dia tranga...
Vehivavy nisy namono teo Analamahitsy
Mpianatra nozaraina fanafody kankana tao Toliara
Nozaraina fanafody kankana ireto mpianatry ny sekoly fanabeazam-p...
Famonoana vehivavy be vohoka !!
Nahagaga sy nahatalanjona ra naheno ny zavatra nitranga tety amin...
Vehivavy 30 taona nisy namono
Efa mivaona mankaiza loatra ny fiaraha-monina eto amintsika fa di...